A ga-etinye Fethiye-Babadağ Egwuregwu Ikuku na Ntụrụndụ, otu n'ime ogige kachasị ewu ewu na ụwa, na njedebe nke afọ na-esote. Egwuregwu Ikuku na Fethiye-Babadağ ntụrụndụ Fada, otu n'ime ụlọ ọrụ ịgba ama ama ama n'ụwa niile [More ...]
World of Volkswagen họpụtara itinye ego na 1.3 ijeri euro nke Manisa, Turkey Bağyurdu ahụ odude n'akụkụ region inye nkwado na suppliers nke akpakanamde ibu factory ngwaahịa òkù a si OSB. Volkswagen si 1.3 ijeri euro maka ulo oru mbo ke Turkey [More ...]
N’inye ụgbọ njem na Bağbaşı Plateau na Denizli, ụgbọ ala USB rụzigharịrị oge ọrụ ya n’oge Eid iji hụ na ụmụ amaala na-etinyekwu oge n’oge Eid al-Adha. N'ime eriri ụgbọ ala USB n'etiti Ugwu Denizli mepere emepe na Bağbaşı Plateau, Kurban mepere [More ...]
Usesnyịnya ụgbọ ala na Denizli 2 Day n'efu
Obodo Denizli Metropolitan mere ụgbọ ala ọha na-akwụghị ụgwọ na ụbọchị mbụ nke 2 nke Eid al-Adha iji gbochie ụmụ amaala inwe ihe isi ike na ịga na-eli ozu, ndị ikwu na ndị enyi. Denizli Obodo ukwu, ụmụ amaala niile ga-anọ ezumike n’ime ezumike dị mma ma dịkwa n’udo [More ...]
Ulo nke Tandem Paragliding Pilot (Level 5) nke Fethiye Chamber of Commerce and Industry na-agba; Ndị ikike ọrụ aka (VQA) kwadoro ya ma tinye ya n'ọrụ. Fethiye Chamber of Commerce and Industry, Tandem Paragliding Pilot [More ...]
3,5 Hour Ugbu a Na Mega Highway Project n'etiti Istanbul İzmir
Onye isi ala Recep Tayyip ERDOĞAN mepere Istanbul-Izmir Motorway 4 na ememe e mere na Bursa na Sọnde. Na mgbakwunye na Onye isi ala ERDOĞAN, osote onye isi Fuat OKTAY, Minister nke Transport na akụrụngwa M.Cahit TURHAN, Minister nke Ikpe Ziri Ezi [More ...]
Istanbul İzmir Streetway Nnukwu BOT na EU
Republic of Turkey, Transportation na Infrastructure Minister Mehmet Cahit Turhan, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan amara na Bursa-Izmir okporouzo moto ẹkenịmde ke Badırga dị na Bursa City Hospital na Istanbul-Izmir ya okwu na Highway Joint mmepe ememme, karịa a akụkọ ihe mere eme ụbọchị [More ...]
Akụkụ kilogram 5 nke Istanbul-Izmir, nke ga-ebelata oge njem 3.5 na-aga n'etiti Istanbul na Izmir ruo elekere 192, bụ Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan guzobere taa. Ego ole ka ị ga-eji otu a? Ugbo ala maka Istanbul na Izmir [More ...]
Opensgbọala Izmir na-emeghe okporo ụzọ!
Opensgbọala Izmir na-emeghe okporo ụzọ! : Akụkụ kilogram 8,5 nke Izzọ Izmir Highway ga-abụ Onyeisi Ala Recep Tayyip Erdoğan ga-emeghe na 3,5 August 192. Transportgbọ njem na akụrụngwa [More ...]